နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများမော်ကွန်း - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 21, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
, လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းလက်ဝဲဖွင့်, ညာဖွင့်
ဖြောင့်, (မထွက်) တစ်ဦးအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ချွတ်ရယူခြင်း, တစ်ဦးအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ (ဝင်) ရက်နေ့တွင်ရယူခြင်း Going
, လမ်း၏ညာဘက်အလျှော့ပေးလိုက်လျောတစ်စုံတစ်ဦးကိုသွား, လမ်း၏ဘေးထွက်ကူးခွေးအ။
သူကသူ့အဘို့ဓာတ်ငွေ့ pumped နှင့်ရေနံစစ်တယ်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ1 မှတ်ချက်
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 20, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
ရွှေ့ပြောင်း Gear ကို
ကိတ်ဂီယာသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် clutch ချွတ်သူမ၏ခြေမ ယူ. clutch နင်းပေါ်အရှိန်မြှ။
Up ကိုအရှိန် / နှေးကွေး
ပိုမြန်သွားပါရန်, ကိတ်ဟာ accelerator ကိုဖိလေ၏။
ကားကိုတက် speeded အမျှသူမတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဂီယာသို့ပြောင်းရွှေ့။
နှေးကွေးစေရန်, ကိတ်ဟာ accelerator ပေါ်တက်ပါစေနဲ့နိမ့်ဂီယာသို့ shilfted ။
ကိတ်ပေါ်တွင်သူမ၏အလှည့် signal ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စတီယာရင်ဘီးလှည့်။
ဒါကြောင့်မိုးရွာသည့်အခါသူမသည်ကားရှေ့မှနျ Wiper အပေါ်လွှဲအပ်တော်မူ၏။
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 19, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
အဂၤလိပ္ ရုပ်ပုံအဘိဓါန် ဘို့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ
တခါတရံမှာသူ့ကြက်ဥ၏အနှစ်သို့မိမိအကင် dips ။
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 17, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
သူမသည်သူမ၏ထိုင်ခုံခါးပတ် buckled ။
ကိတ်စက်နှိုးသို့ key ကို ထား. ,
123 လာမည့်→